Qoondada Miisaaniyadda 2018-da ee Wasaaradaha Dowladda Federaalka ah – Kalfadhi
Miisaaniyad waxaa la yiraahdaa qorshe waqtiyeysan oo maaliyadeed oo loogu talagalay in howl lagu fuliyo. Miisaaniyaddu waxay na tusisaa dakhliga iyo kharashka waqti cayiman. Waxay udub dhexaad u tahay shaqooyinka hay’adaha kala duwan ee dowladda. Wasaaraduhu waxa ay ka mid yihiin hay’adaha gundhigga u ah shaqooyinka dowladda.
Sanadkan 2018-da, wasaaradaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay tiro ahaan ka kooban yihiin 25-wasaaradood oo mid walba ay ahmiyad gaar ah u leedahay bulsho-weynta Soomaaliyeed.
Miisaaniyadda sanadlaha ah ee dowladda waxay u qoondeysaa wasaaradaha dakhli ay ku gutaan howlahooda kala duwan. Miisaaniyadda waxaa soo qora ama soo qoondeeya wasaaradda maaliyadda, waxayna soo martaa golaha fulinta iyo baarlamaanka, sidii si waafaqsan loogu ansixin lahaa. Qormadan waxaan si guud ugu eegi doonnaa sida Miisaaniyadda 2018 loogu qeybiyay wasaaradaha dowladda, wasaaradaha helay lacagta ugu badan, ama ugu yar iyo sidoo kale in qeybintan ay ku saleysan tahay baahiyaha waddanka ka jira iyo in kale.
Sidee Miisaaniyadda 2018-da loogu qeybiyay wasaaradaha Dowladda Federaalka ah
Miisaaniyadda dowladda dhexe mar kasta waxay tixraac ka qaadataa miisaaniyadaha sanadihii hore iyo sida wasaaradaha loogu kala qeybiyay. Iyada oo saameyn ku lahaan karta hadba baahiyaha markaa soo cusboonaada.
Mahad Waasuge, oo ah cilmi baare iyo qoraa ka tirsan Hay’adda Cilmi-baarista ee Heritage, wax badanna ka qora arrimaha Soomaaliya iyo Soomaalida, ayaa aaminsan in miisaaniyad sanadeedka 2017 ay ahayd tixraaca ugu weyn ee qaabka miisaaniyadda 2018 loo qeybiyay. Waxay tusaale u noqotay miisaaniyadda sanadeedka 2018-da iyo sidii loogu kala qoondeeyay wasaaradaha. Marka laga reebo wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, miisaaniyadda 2018 waxay sare u qaadis ku sameysay qoondada lacageed ee wasaaradaha kala duwan.
Lacagta ugu badan waxaa, sida sawirka hoose ka muuqata, helay wasaaradaha Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, Maaliyadda iyo Waxbarashada. “Waa wasaarado shaqooyin laf-dhabar ah u haya xukuumadda, balse haddana waxa jira wasaarado iyo hay’ado shaqooyin muhiim ah haya haddana aan helin miisaaniyad ku filan,” ayuu yiri Mahad Waasuge oo la hadlay Kalfadhi.
Sawirka hoose wuxuu sidoo kale muujinayaa qoondada wasaaradaha ugu lacagta yar. Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ayaa ah qoondo ahaan wasaaradda ugu lacagta yar, iyadoo ay weheliyaan wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga iyo wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xaquuqda Aadanaha. Hase yeeshee, qoondada wasaaradahan waxay tiro ahaan ka badan yihiin miisaaniyadaha sanadihii la soo dhaafay.
“Inta badan way adag tahay in hay’ado ama wasaarado miisaaniyad horey u lahaa laga joojiyo ama aad looga jaro, balse hay’ado iyo mashaariic cusub oo la unkay miisaaniyad dheeri ah waa loo sameyn karaa,” ayuu yiri Mahad.
Qeybintu maku saleysan tahay baahiyaha wadanka ka jira?
Saynab Maxamed Xasan oo ah la-taliye madaxbannaan iyo qoraa, ahna aasaasaha iyo guddoomiyaha ururka u dhaqdhaqaaqa sinnaanta laboodka iyo dheddigga (SGEM), ayaa aaminsan in qeybinta miisaaniyadda ay ku xiran tahay waxyaabo badan; sida muhiimadda ay u leedahay jewiga ama siyaasad markaas socota, shaqaalaha, howsha ay qabanayaan iyo hadba sida wasiirka markaas jooga uu u gorgortamo ama xiriirka uu la leeyahay Raysul-wasaaraha.
Sidoo kale Mahad Waasuge ayaa aaminsan in miisaaniyadda qeyb ahaan aysan ku saleysneyn baahida dalka ka jirta, balse aanan la iska indha-tiri karin duruufaha dalka ka jira.
Inta badan qoondada miisaaniyadda waxay ku saleysan tahay miisaniyadaha sanadihii la soo dhaafay iyo caqabadaha ay wasaaradaha kala kulmeen waxqabadkooda. Maxamed Ibraahim Siid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaadda, lana shaqeeya wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo ka mid ah kuwa ugu miisaaniyadda yar, ayaa aaminsan in ay habboon tahay sida miisaaniyadda 2018 loogu qoondeeyay wasaaradaha dowladda. Wuxuu xusay in wasaaradaha wax-soo-saarka dalka iyo kuwa arrimaha bulshada ay xilligan yihiin kuwo magic-u-yaal oo kaliya ah.
W.D: Axmed Maxamed Amiin
Dulmi baahsan ayey tirsanayaan dumarka ka shaqeeya dowladda hoose ee Hargeysa